Mavhidhiyo Taura Nyaya Nezvekurima Mbatatisi YeRamangwana - Potatoes News
Holland Innovative Potato (HIP) inoita kuti tsvakiridzo ive yekurima uye mbichana-mbichana kurimwa kwembatatisi kunowanikwa kuburikidza neruzhinji rwezvikamu zvezivo kana mavhidhiyo ezveruzivo.
Mumavhidhiyo, vaongorori vanotsanangura kuti gohwo repamusoro rinogona kuwanikwa sei pamwe nekushomeka kwemupfudze nemafuta emafuta. Vanotsanangura zvakare kuti kurasikirwa kwekurima kunogona kugumira sei nemushonga unouraya zvipembenene uye mhando dzakasimba. Iwo matipi eruzivo anogona kutariswa pa iyo HIP webhusaiti .
Kuwanika kwenzvimbo yakaorera uye nemvura yakachena yakakwana mukushanduka kwemamiriro ekunze kunounza matambudziko ekurima pasi rese mumakumi emakore ari kuuya, HIP inoti Iyo mbatatisi inogona kutora chinzvimbo chakakosha mune izvi. Panyaya yekushandisa mvura uye ivhu, chirimwa chinoshanda kwazvo chinopa mikana yekugadzirwa kwechikafu kwakasimba.
Chakakosha chirimwa chepasirese
Uyezve, iyo mbatatari yakapfuma mumapuroteni, makabhohaidhiretsi, mavitamini uye zvinovaka muviri, izvo zvinopa kudya kunovaka muviri. Sekureva kweHIP, hutsva hwekuberekesa nekugadzirisa michina yave kuwanikwa kuzadzikisa kugona kwembatatisi sechirimwa chakakosha pasirese.
Netherlands ndiye mutungamiri wepasirese mukuzadza mbatatisi, kugadzirwa kwekugadzira uye kutsvagisa. Holland Innovative Potato (HIP) yakavambwa muna2017 yekuongorora nekushandisa mikana yekusimudzira muketani yekugadzira. Izvi zvakaitika panguva yekutanga kweDutch Potato Organisation (NAO) uye Association for Potato Processing Industry (Vavi).
Nhengo dzeHIP makambani nemasangano ari kushanda mukucheka, kutengeserana nekugadzirisa mbatatisi. Nhengo idzi, iyo Ministry yeLNV neNetherlands Organisation yeSainzi Yekutsvagisa (NWO) vanobhadhara kutsvagurudza uku. Izvi zviri kuitwa kuYunivhesiti yeGroningen, iyo Yunivhesiti yeAmsterdam uye Wageningen U&R.
1. Varimi vembatatisi vanogona sei kugadzirisa kukura kwembatatisi nenzira yakanangwa? Dashibhodhi iri kugadzirirwa dosed fetereza uye kudiridza.
2. Midzi yemuti wembatatisi inokura sei muvhu kuti itore zvinovaka muviri nemvura? Aya maonero anogona kuiswa kusarudza mhando nyowani dzinoda kushomeka kwekusangana uye zviri nani kugona kumira kusanaya uye kunaya munyu muvhidhiyo.
3. Zvirimwa zvembatatisi zvinogovera sei zvivakwa zvadzo pamusoro pemashizha nematubhu? Neruzivo urwu, mhando nyowani dzinogona kusarudzwa dzinobata zvakanyanya nemanyowa nemvura uye nekuisa tubers panguva yakakodzera uye nezvakanaka zvemukati.
4. Inogona kufanotaurwa sei mbatatisi. Nekuda kweizvozvo, mbatatisi yembeu inogona kugoverwa nekudyarwa nenzira yakanangwa, kuitira kuti simba rekumera rishandiswe zvakakwana.
5. Zvirimwa zvembatatisi zvinotaurirana sei nematato cyst nematodes? Nokunzwisisa zviratidzo zvinodyarwa nemuti wembatatiri kumatatu aya, zvinokwanisika kudzora kudzivirira kwekuneta kwembatatisi.
6. Mhando dzemapatata emusango dzinopokana nezvirwere nezvipukanana izvo parizvino pasina mhinduro yekuberekesa here? Vehukama vehukama hwembatatisi vanovhenekwa kuti vadzivirire fungi, bhakitiriya, mavairasi, nematodes uye zvipembenene. Zvirimwa zvinodzivirira zvinoshandiswa pakuberekesa mhando dzematapiri dzinoda mashoma ekudzivirira zvirimwa, pasina kutungamira mukurasika kwekugadzirwa.
Vhidhiyo's vertellen verhaal pamusoro peardappelteelt van de toekomst
Tags: Murimi WeRamangwanaKurima mbatatisimbatatisi mhandotsvakurudzokusagadzikanaWUR
Mapato matatu ari kushanda pakuburitsa magenome ezvipuka zvakakosha uye zvipembenene zvinobatsira
Mukadzi weruoko rwerudyi rwePEI mbichana ndiMary Kay Sonier